वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानको गति असाधारण : जस्ले कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लाउँदैछ « News24 : Premium News Channel
एजेन्सी, १० जेठ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमण कोरोनाका लागि विश्वभरका वैज्ञानिकहरु भ्याक्सिन तयार गर्नका लागि कडा मेहनत गरिरहेका छन् ताकी यसको महामारीलाई रोक्न सकियोस भनेर ।
वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस खोपको लागि अनुसन्धान गरिरहेको गति असाधारण छ । हामीले यो भुल्न हुदैनकी कुनै पनि भ्याक्सिनको विकासमा वर्षौ लाग्न सक्छ कहिले त दशकौं पनि लाग्न सक्ने जनाइएको छ ।
उदाहरणका लागि हालसालै स्वीकृत गरिएको इबोलाको विकास गर्न १६ वर्षको समय लागेको थियो । र यो धेरै सामान्य छ कि खोपको विकासको प्रक्रिया धेरै चरणहरूमा हुन्छ।
पहिलो चरण प्रयोगशालामा छ, त्यसको पछाडि जनावरहरूको परीक्षण हुन्छ। यदि प्रयोगको क्रममा यो भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सुरक्षित छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देखा पर्छ भने, त्यसपछि परीक्षण मानवमा सुरु हुन्छ ।
खोपको छ आशा
मानवमा परीक्षणको प्रक्रिया पनि तीन चरणमा पूर्ण हुन्छ। पहिलो चरणमा भाग लिने व्यक्तिको संख्या एकदम थोरै छ र तिनीहरू स्वस्थ छन्। दोस्रो चरणमा, परीक्षणको लागि भाग लिनेहरूको संख्या अधिक छ र खोप कति सुरक्षित छ भनेर हेर्न नियन्त्रण समूहहरू छन्।
नियन्त्रण समूहले एक समूहलाई जनाउँछ जुन परीक्षणमा भाग लिने बाँकी व्यक्तिहरूबाट अलग राखिन्छ। प्रयोगको तेस्रो चरणमा, यो खोपको क्षमता कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ।
हाल राम्रो कुरा भनेको तीन महिनाभित्र कोरोनाको भ्याक्सिनमा काम गरिरहेको ९० अनुसन्धान टोलीबाट ६ टोली एउटा ठूलो लक्ष्यमा पुगेको छ । जसले मानव परीक्षण गरिरहेको छ । विकास कार्य भइरहेको छ वटा भ्याक्सिनहरूं यस्ता छन्।
एमआरएनए – १२७३ भ्याक्सिन
आधुनिक थेराप्युटिक्स एक अमेरिकी बायोटेक्नोलोजी कम्पनी हो जसको मुख्यालय म्यासाचुसेट्समा रहेको छ । यो कम्पनी कोरोना भ्याक्सिनको विकाको लागि नयाँ अनुसन्धान रणनीतिमा काम गर्दैछ ।
तिनीहरूको उद्देश्य एक खोप तयार गर्नु हो जुन एक व्यक्तिको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई तालिम दिनेछ ताकि उनीहरूले कोरोना भाइरस विरूद्ध लड्न र रोगलाई रोक्न सकुन् ।
यो गर्नका लागि जो परमपरागत विधि अपनाईन्छ तिनीहरु जीवित तर कमजोर निष्क्रिय भाइरसको प्रयोग गर्छन् । तर आधुनिक थेराप्युटिक्स एमआरएनए एक हजार २ सय ७३ भ्याक्सिनमा ति विषाणुको प्रयोग गरिएको छैन जो कोरोना महामारीका लागि जिम्मेवार रहेको छ ।
यसको ट्रायललाई अमेरिकाको नेसनल इन्ष्टिच्युट अफ हेल्थको कोष मिलिरहको छ । यो भ्याक्सिन म्यासेन्जर आरएनए या म्यासेन्जर राइबोन्यूक्लिक एसिडमा आधारित छ ।
वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको आनुवंशिक कोड तयार गरेका छन, यसको सानो अंश व्यक्तिको शरीरमा इन्जेक्सन गर्नुपर्नेछ। वैज्ञानिकहरू आशा राख्दै छन् कि यो गरेर एक व्यक्तिको प्रतिरोधक क्षमताले संक्रमण विरूद्ध लड्न प्रतिक्रिया गर्दछ।
एन – ४८०० भ्याक्सिन
अमेरिकी बायोटेक्नोलजी कम्पनी इनोभियो फार्मास्यूटिकल्सको मुख्यालय पेन्सिल्भेनियामा रहेको छ। इनोभियोले पनि नयाँ अनुसन्धान रणनीति कार्यान्वयन गर्दै छ। कम्पनीको ध्यान खोप सिर्जनामा केन्द्रित छ जसमा डीएनए प्लाज्मिड सानो प्रकारको आनुवंशिक संरचनाको एक प्रकारमार्फत सीधा बिरामीको कोषहरूमा इंजेक्सन गरिन्छ।
यसले बिरामीको शरीरमा संक्रमणसँग लड्न एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्न सुरु गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। इनोवियो र आधुनिक दुबै नयाँ प्रविधिको सहारा लिइरहेको छ । जसमा एक अनुवंशिक संरचना परिवर्तन गर्न गइरहको वा फेरि त्समा सुधार हुँदै छ।
खोपको मार्गमा चुनौतीहरू
डा. फेलिप तापिया म्याग्डेबर्ग, जर्मनीको म्याक्स प्लान्क इन्स्टिच्यूटको बायोप्रोसेस इन्जिनियरिङ समूहका विशेषज्ञ हुन् । उनी भन्छन ‘तर यी कुनै पनि प्रविधिबाट कुनै औषधि वा उपचार पत्ता लागेको छैन। न त कुनै अन्वेषण मानवमा नै प्रयोग गर्न दिइन्छ।
डा. फेलिप तापिया बताउँछिन ‘तर तपाई अलिक सावधान हुनु आवश्यक छ, किनकि ती खोपहरू हुनेछन् जसको इतिहासमा अरू कुनै उदाहरण छैन , मोडेर्ना थेराप्यूटिक्सका वैज्ञानिकहरूले समेत भनेका छन् कि उनीहरूले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यो खोपलाई उत्पादन र बजारमा राख्नु हो किनभने उनीहरूसँग हाल मेसेन्जर राइबोन्कलेस एसिडमा आधारित खोप विकास गर्ने इजाजतपत्र छैन। ’
चीनमा के भइरहेको छ ?
हाल चीनमा तीनवटा खोप परियोजनाहरू छन, जसमा मानव परीक्षण मानिसहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। उत्पादनका परम्परागत विधिहरू यी प्रयोग भइरहेका छन् ।
अम ५ –एन कोभ भ्याक्सिन
बायोटेक्नोलजी संस्थान र चिनियाँ एकेडेमी मिलिटरी मेडिकल साइंसेज पनि यस परियोजनामा क्यासिनो जीवविज्ञानको साथ काम गरिरहेका छन्। बायोटेक्नोलोजी संस्थान र चिनियाँ एकेडेमी मिलिटरी मेडिकल साइंसेज पनि यस परियोजनामा क्यासिनो जीवविज्ञानको साथ काम गरिरहेका छन्।
अडी–एन कोभी भ्याक्सिनमा एडेनो भाइरसका एक खासपना, एडेनोभायरसको एक विशेष संस्करण भेक्टरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। एडेनोभाइरस भाइरसहरूको समूह हो जसले हाम्रो आँखा, ट्रेकिआ, फोक्सो, आन्द्रा र स्नायु प्रणालीमा संक्रमण गर्दछ।
सामान्य लक्षणहरू ज्वरो, चिसो, घाँटी दुखाइ, पखाला र गुलाबी आँखाहरू हुन्। र भेक्टरले भाइरस वा एजेन्टलाई जनाउँछ जुन सेलमा डिएनए प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ कि यस भेक्टरले प्रोटीन सक्रिय पार्छ जुन संक्रमण लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि सहयोगी हुन सक्छ।
एल भी एसएमइएनपी– डिसी भ्याक्सिन
अर्को मानव खोप एल भी एसएमइएनपी– डिसी भ्याक्सिनको परीक्षण चीनको शेन्जेन जीनोइम्यून मेडिकल संस्थानमा चलिरहको छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति सक्रिय गर्ने एचआईभी जस्तो रोगको लागि जिम्मेदार लेन्टिभाइरसबाट उत्पादित ती सेलहरू प्रयोग गर्दछ।
वुहानमा बनिरहेको अर्को भ्याक्सिन
चीनमा चलिरहेको तेस्रो खोपमा यसलाई निष्क्रिय भाइरसको खोप दिने प्रस्ताव छ। वुहान जैविक उत्पादन संस्थानमा काम भइरहेको छ। यस खोपको लागि निष्क्रिय भाइरसमा केहि परिवर्तनहरू गरियो, जसको कारणले उनीहरू कसैलाई बिरामी पार्ने क्षमता गुमाउँछन्।
डा. फेलिप तापिया बताउँछिन, “यो खोप तयार पार्ने सब भन्दा साधारण टेक्निक हो। धेरै जसो खोपहरू यस प्रक्रियाद्वारा तयार गरिन्छन् , स्वीकृति लिनमा एक्दम कठिनाई छ। १२ देखि १६महिना भित्र खोप तयार भइरहेको छ भने यो टेक्नोलोजीमा आधारित हुनेछ। ”
च्अडओएक्स वान भ्याक्सिन
ब्रिटेनका अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीका जेनर इन्स्टिचुट अएडअक्स वान भ्याक्सिनको विकासका काम चलिरहेको छ । २३ अप्रीलमा यूरोपमा यसका पहिला क्लीनिकल ट्रायल सुरु भएको छ ।
जेनर इन्स्टिच्यूटका वैज्ञानिकहरू पनि उही टेक्नोलोजीमा काम गरिरहेका छन् जसमा चिनियाँ कम्पनी क्यासिनो बायोलजिक्सले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर अक्सफोर्डको टोलीले चिन्पाञ्जीबाट लिएको एडेनोभायरसको कमजोर संस्करण प्रयोग गर्दैछ। यसमा केही परिवर्तनहरू गरिए ताकि यो मानव बीचमा विकसित नहोस्।
डाक्टर फेलिप तापिया भन्छिन “वास्तवमा उनीहरूले ल्याबमा भाइरस उत्पादन गरिरहेका छन् जुन हानिकारक छैन। तर सतहमा त्यहाँ कोरोना भाइरस प्रोटीन रहेको छ। आशा छ कि यी प्रोटिनहरूले मानव प्रतिरोधात्मक क्षमता सक्रिय गर्दछन्।”
वैज्ञानिकहरूले यस प्रविधि पहिले पनि प्रयोग गरिरहेछन्। यसको सहायताले, मार्स कोरोना भाइरसको खोप विकसित भएको छ। भनिन्छ कि यस खोपको क्लिनिकल परीक्षणहरूले सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गरेको छ।
बृहत् उत्पादनको चुनौती
यद्यपि कोरोना रोगको उपचार युद्ध तहमा खोजी भइरहेको छ, विज्ञहरूले भने कि यी खोपहरू मध्ये कुनैले पनि काम गर्दछ कि गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
डाक्टर फेलिपे टापियाले बताएका छन्, “अहिले नै यो थाहा छैन । उदाहरणका लागि कसैले पनि यो बताउन सक्छ की यी भ्याक्सिनको अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के हुन सक्छ भनेर अलग–अलग जनसंख्या या अलग – अलग उमेरका मानिसहरुमा यी भ्याक्सिनको के–के असर पर्न सक्छरु यो समयसंगै थाहा पाउनेछ । ”
एक प्रभावकारी भ्याक्सिन बनाउने, यसलाई अनुमोदन प्राप्त गर्ने पहिलो चरण मात्र हुनेछ। त्यस पछि अरबौं जनताका लागि यो खोप उत्पादन गर्नु र खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई र्पुयाउनु नै वास्तविक चुनौती हो। बीबीसीको सहयोगमा